FAQs | Beyin प्याकिंग | फूड बैग कारखाना
१, तपाईं कारखाना वा ट्रेडिंग कम्पनी हो?
हामी एक कारखाना हो, जो चीनको Liaoning प्रान्त मा स्थित छ, हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न स्वागत छ।
२, तपाईको MOQ के हो?
तयार गरिएको उत्पादनहरूका लागि, MOQ १००० pcs हो, र अनुकूलित सामानहरूको लागि यो तपाईंको डिजाइनको आकार र प्रिन्टिंगमा निर्भर गर्दछ। अधिकांश कच्चा माल 000००० मीटर, MOQ = 000००० / L वा W प्रति ब्याग हो, प्राय: 30०,००० pcs। अधिक तपाईं अर्डर, कम मूल्य हुनेछ।
,, तपाईं oem काम गर्नुहुन्छ?
हो, यो हामीले गर्ने मुख्य काम हो। तपाईं हामीलाई तपाईंको डिजाइन सीधा दिन सक्नुहुन्छ, वा तपाईं हामीलाई आधारभूत जानकारी प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ, हामी तपाईंको लागि नि: शुल्क डिजाइन गर्न सक्दछौं। यसका साथै हामीसँग केहि तयार उत्पादहरू पनि छन्।
त्यो तपाईंको डिजाइन र मात्रामा निर्भर गर्दछ, तर सामान्यतया हामी तपाईंको अर्डर २ finish दिन भित्र सक्नेछौं हामी डिजाइन र जम्मा गरेको पुष्टि भएपछि।
,, कसरी म सहि उद्धरण पाउन सक्छु?
पहिलो कृपया मलाई झोलाको प्रयोग बताउनुहोस् ताकि म तपाईंलाई सबैभन्दा उपयुक्त सामग्री र प्रकारको सुझाव दिन सक्छ, उदाहरणका लागि, पागलका लागि सबैभन्दा उत्तम सामग्री BOPP / VMPET / CPP हो, तपाईं शिल्प कागजको झोला पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, धेरै प्रकार खडा हुन्छ। झोला, विन्डोको साथ वा विन्डो बिना तपाईलाई आवाश्यक हुन्छ। यदि तपाईं मलाई सामग्री र प्रकार बताउन सक्नुहुन्छ जुन तपाईं चाहनुहुन्छ, त्यो उत्तम हुनेछ।
दोस्रो, आकार र मोटाई धेरै महत्त्वपूर्ण छ, यसले moq र लागतलाई असर गर्छ।
तेस्रो, प्रिन्टि and र रंग। तपाईसँग एउटा झोलामा कम्तिमा colors रंगहरू हुन सक्छन्, तपाईसँग बढी रंग छ, तपाईको लागत अधिक हुनेछ। यदि तपाईंसँग सहि मुद्रण विधि छ, त्यो उत्तम हुनेछ; यदि होईन भने, कृपया तपाइँ प्रिन्ट गर्न चाहानुभएको आधारभूत जानकारी प्रदान गर्नुहोस् र हामीलाई तपाइँले चाहानु भएको शैली बताउनुहोस्, हामी तपाइँको लागि निःशुल्क डिजाइन गर्नेछौं।
चौथाई, मात्रा। अधिक, सस्तो।
,, के मैले प्रत्येक पटक अर्डर गर्दा सिलिन्डर लागत तिर्ने आवश्यकता छ?
होइन। सिलिन्डर चार्ज एक पटकको लागत हो, अर्को पटक यदि तपाईं समान झोला एकै डिजाइनको क्रमबद्ध गर्नुहुन्छ भने, कुनै सिलिन्डर चार्जको आवाश्यक पर्दैन। सिलिन्डर तपाईको झोला आकार र डिजाईन रंगमा आधारित छ। र हामी तपाइँको सिलिन्डर राख्छौं2साल को लागी तपाइँ तपाइँलाई क्रमबद्ध गर्नु अघि।
,, कस्तो प्रकारको भुक्तानी विधिहरू तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ?
सामान्यतया %०% निक्षेप हामीले डिजाइनको पुष्टि गरेपछि, र वितरण भन्दा पहिले पूर्ण भुक्तान। तपाईं TT, क्रेडिट कार्ड, PayPal, वेस्टर्न यूनियन, व्यापार आश्वासन, आदि द्वारा भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ।
,, शिपिंग लागतको बारेमा कसरी?
ढुवानी लागतहरू तपाईंले छनौट कुल वजन र सर्तहरू अनुसार फरक हुन्छन्। सामान्यतया १०० किलोग्राम मुनि कार्गोसका लागि हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाई एक्स्प्रेस छनौट गर्नुहोस्, जस्तै डीएचएल, फेडएक्स, यूपीएस, आदि, यदि १००-k०० किलोग्रामका लागि, वायुमार्फत जहाज उत्तम छ, जबकि 500०० किलोग्रामभन्दा माथि छ भने, समुद्रीतर्फ एक राम्रो विचार हुनेछ। साथै हामी तपाईंको लागि DDP गर्न सक्दछौं यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने।
विभिन्न भार, सर्तहरू र समयहरूमा शिपिंग लागत परिवर्तनहरू, हामी डेलिभरी अघि तपाईंको लागि उत्तम समाधान फेला पार्नेछौं।
,, डिजाइनका लागि तपाईले कुन फाइलहरू स्वीकार्नुहुन्छ?
हामी एआई, पीडीएफ, पीडीएस, आदि स्वीकार गर्दछौं, कुनै पनि फाईल तपाईंले तहहरूमा मूल डिजाइनहरू देखाउन सक्नुहुनेछ। साथै हामी तपाईंको लागि डिजाईन सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं।
१०, के तपाई बिक्री पछि सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ?
हो, पक्कै पनि। पहिलो, हामी डेलिभरी पहिले र फेरि जाँच गर्नेछौं, गुण सहित, मात्रा, प्याकिंग, आदि सहित, र तपाईं सबै भन्दा राम्रो प्याकिंग बैग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि ग्यारेन्टी गर्न हाम्रो सक्दो प्रयास गर्नेछौं। तपाईंले तिनीहरूलाई प्राप्त पछि, हामी कसरी भर्न, सील गर्ने र तिनीहरूलाई राख्ने बारेमा सुझावहरू दिन सक्छौं। यसका साथै, एक पटक हाम्रो झोलाहरूमा गुणस्तरीय समस्या आयो भने, हामीले लिने सबै जिम्मेवारीहरू लिने छौं, सक्रिय रूपमा तपाईंसँग कुराकानी गर्नेछौं र तपाईंको लागि उत्तम समाधान फेला पार्नेछौं।